Toluna Start: Faharanitan-tsaina amin'ny mpanjifa amin'ny fotoana iainana miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina manerantany | Martech Zone
Toluna Start: Faharanitan-tsaina momba ny mpanjifa amin'ny fotoana iarahana amin'ny vondrom-piarahamonina eran-tany
Alakamisy Oktobra Oktobra 29, 2020 Alakamisy Oktobra Oktobra 29, 2020 Douglas Karr
Toluna Start dia sehatra haingam-pandeha mpanjifa haingam-pandeha sy maharitra. Ny vokatra dia manome ny fahitan'ny mpanjifa, ny fikarohana eny an-tsena ary manome hery ny mpanjifa hitarika eo noho eo ny fikarohana qualitative sy qualitative amin'ny tena izy. Tsy toy ny sehatra fikarohana tsena nentim-paharazana, Toluna dia manambatra ny teknolojia ilaina sy ny fidirana amin'ny vondron'olona manerantany hanome ny vaovao ilainao.
Na fampiroboroboana vokatra vaovao mailaka na fanandramana marika sy hafatra momba ny serasera, i Toluna dia manana sehatra fitsikilovana mpanjifa hanampy amin'ny fikarohana eny an-tsena ny mpanjifa:
Fampahalalana ho an'ny mpanjifa - Midira loharano tokana ho an'ny fahitana ny mpanjifa rehetra. Toluna Start dia sehatra fitsikilovana mpanjifa hatramin'ny farany ary miaraka amina fidirana tokana. Midira vahaolana isan-karazany momba ny fahitana mandeha ho azy manarona ny famolavolana fanadihadiana, ny valinteny mpiombona fanadihadiana ary ny tabilao fanaovana tatitra misy ny fomba fijery sy tolo-kevitra.
Analytics sy Dashboard - Midira eo noho eo ny angon-drakitrao. Manomboka amin'ny tatitra an-tsaha sy valin'ny voambolana hatramin'ny fanadihadiana lalindalina kokoa. Fandrefesana ny fahombiazana amin'ny KPI ao anatin'ny minitra miaraka amin'ny dashboard natao hanomezana fomba fijery azo tanterahina. Fampahalalana momba ny lanjany, mamorona olom-bitsy, sivana ary araho ny ambaratonga rehetra fanandramana manan-danja. Sintomy ary atsofohy ny slide slide PowerPoint, ny teny cloud cloud, manamboatra latabatra ary mampandeha sora-baventy raha ilaina izany.
Fiaraha-monina sy fifanakalozan-kevitra mivantana - Mandraisa anjara haingana amin'ireo olona manan-danja indrindra amin'ny marikao. Halalino lalina kokoa ny sarotam-pihetseham-po sy antony manosika ny fitondran-tena. Mamolavola vondrom-piarahamonina manana endrika feno sy mahasarika - na inona na inona ny tsena kendrenao. Mametraha dinika mivantana misy marika ao anatin'ny minitra vitsy ary miaraha miasa amin'ny mpihaino kendrenao.
Fahitana fihetsika - Fantaro ny fihetsiky ny mpanjifa manerana ny finday sy ny birao, ny tranokala ary ny fampiharana. Ahitana fampiharana napetraka, lamina fitetezana, fitondran-tena fizahana, fitondran-tena mikaroha, ary mividy fampahalalana amin'ireo mpivarotra lehibe indrindra eto an-tany.
Modely mandeha ho azy - Midira amin'ireo mpamaly amin'ny fotoana tena izy. Vidio, tombano ny fahafaha-manao ary alefaso ny tetikasa afaka minitra vitsy. Ny vahaolana santionany feno nataon'i Toluna dia manome ny mpikaroka làlana mivantana ho an'ny vondrom-piarahamonina misy mpiorina ao aminay izay manana valiny tsara sy be zotom-po.
Global Panel Community - Midira amin'ny herin'ny olona mihoatra ny 30 tapitrisa manerantany. Vonona, vonona ary afaka manome ny hevitra ilainao ny mpikambana ao aminay, amin'ny fotoana tena izy hanatanterahana ny fanapahan-kevitrao. Mikendry ny mpanjifa manerana ny tsena 70+ mampiasa mombamomba demografika sy fitondran-tena mihoatra ny 200.
Fikarohana fikarohana - Ireo manam-pahaizana ao Toluna miaraka amin'ny orinasan-dry zareo Harris Interactive manana fahaizana mitsangana lalina izay afaka manao ny tsy fantatra, fantatra. Ny fahaizan'izy ireo dia tafiditra ao anatin'ireo vahaolana mandeha ho azy manerantany. Na afaka mamolavola programa manokana miaraka amina manam-pahaizana momba ny fikarohana izy ireo. Na inona na inona serivisy mifanaraka amin'ny ilainao.
Fandaharana Demo Start Demo
Tags: santionany mandeha ho azyfihetsiky ny mpanjifafahitana ny mpanjifafifanakalozan-kevitra mivantanatsena fikarohanaserivisy fikarohanatoluna
Zombie-Followers: Mandeha eo Amin'ny tontolon'ny Marketing Influencer ny Maty